रबिको बारे नराम्रो समाचार लेख्ने नेपाल आज लाई दिए एस्तो जवाफ फोटो सहित
सन्चार कर्मी रबि लामिछाने लाई फेरि नेपाल आज ले एउटा अच्ममै को न्युज छापेको छ । नेपाल आज माथी रबि ले आफ्नो फेसबुक मार्फत कडा जवाफ दिएका छन । रबि लामिछानेलाई उनकै प्रोडुसरले छाडेयाक एन्ड एति होटेल मा रबि र प्रोडुसर बिच झडप भनेर नेपाल आज ले छापेको छ । एहि बिषय लाई लिएर सन्चार कर्मी रबि लामिछाने ले आफ्नो फेसबुक मार्फत एस्तो लेखेका छन । उनले लेखेको फेसबुक स्टाटस जस्ता को तेस्तै।
उहाँले मेरो फोन उठाउनु भएन।उहाँको वेबसाईटमै भएको नम्बर याहा राखेको छु। सभ्य शिष्ट भाषामा उहालाई सोधिदिनु होला, म कहिले याक एण्ड यति होटेल गए ? एकै परिवारका दाजुभाइ जसरी मिलेर दिनरात सङै काम गरिरहेका कार्यक्रम प्रोडुसर मेरो प्रिय भाइ दिपक बोहरा र म बीच कुटपिट भएको उहाले कहाँ देख्नु भएछ ? उहाँसग प्रमाण मागि मलाई सहयोग गरिदिनु होला ।
उहाले मेरो फोन उठाउनु नै भएन अहिले अफ गर्नु भो । हामी अर्को हप्ता कार्यक्रमको ४०० भागको तयारीसगै कार्यक्रम निर्माणमा ब्यस्त छौ । उहाँ लगायत धेरै मित्रहरु प्रत्यक दिन केही न केही लेखेर खेद्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । यस्तै हो पत्रकारिता ? उहाँहरु जस्ताको एउटा ठूलो समूह छ जो अब जिन्दगी भर खेदी रहने प्रण सहित लाग्नु भएको छ । कसैको जुठो खाएर यस्तो झुठो समाचार लेखि सकेर घर गएर आफ्ना सन्तान र बा आमाको आँखामा आँखा जुदाउन कसरी सक्नुहुन्छ ? छि.. यस्तो काम गरेरपनि के खानु ?
अनि आर्यन तामाङ भनिने अनिल तामाङ जी.. मध्य रातमा प्रहरिको कुटाई खाएर रिपोर्टिङ गर्ने मरो रिपोर्टरलाई तपाईंले लगाउनु भएको आरोपका बारे तपाइँसङ लाईभ कुरा गर्न ४ पटक कल र म्यासेज गरि सके । न भाग्नुहोला, आज लाईभ कुरा गरौ । अथार्थ सुनेर जिब्रो टोक्ने कि हामीलाई गरेको गाली गलौज सहितका कमेन्टहरु मेट्ने,आजको कार्यक्रम पछि निर्णय लिनुहोला । अतिभो